दशैँमा लकडाउन हुँदैन, यस्तो छ कारण ! – पानी पधेरो
दशैँमा लकडाउन हुँदैन, यस्तो छ कारण !
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालीहरुको महान चाड दशैँमा लकडाउन नहुने बताएका छन्। तर, यस अघि सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या २५ हजार पुगेपछि लकडाउन गर्ने जनाएको थियो। यतिबेला सक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार छ। यस्तोमा दशैं आसपासमै लकडाउन हुने चिन्ताले मानिसहरुलाई सताएको छ। तर दशैं आसपासमा लकडाउन लकडाउन गर्ने गरी मन्त्रालयले कुनै सुझाव सरकारलाई नदिएको गौतमले बताए।
‘हामीले यसअघि संक्रिय संक्रमित २५ हजार पुगे हाम्रो संरचनाले उपचार गर्न सक्दैन भनेर पुनः लकडाउन गर्न सुझाव दिने भनेका हौँु, उनले अगाडि भने, ‘तर दशैं आसपासमै लकडाउन गर्न कुनै सुझाव दिइएको छैन।’उनले स्वास्थ्य मापदण्ड एकदमै कम पालना भएको भन्दै सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि भनेका छन्।
अनुहार एवम् छालाको चमक बढाउन प्रयोग गर्नुस् बेसार